/ ngwaahịa / Hormones / 17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ, Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụaka 500,000 mụrụ na mbụ na United States kwa afọ. Ọmụmụ ime nwa (PTB), ma ọ bụ ịmụ nwa karịa nkedo nke 37, na-etinye ụmụ ọhụrụ n'ọnọdụ ize ndụ dị elu nke ọnwụ ma bụrụ isi ihe kpatara ọrịa nkwarụ na-adịru nwa oge na ụmụaka. Tụkwasị na nke ahụ, ụgwọ ọrụ ahụike PTB metụtara ụlọ ọrụ nlekọta ahụ ike nke US karịa $ 26 kwa afọ. Ime ka PTB dị oké mkpa iji mee ka ahụike na mmepe nke ụmụ ọhụrụ gafee mba ahụ.
I.17-Hydroxyprogesterone na-eme ka ntụ ntụ na-emepụta ihe dị iche iche:
Molekụla Formula: C27H40O4
Ọbara arọ: 428.6
Mgbalị siri ike kpebisiri ike ịdabere na mmụba nke ụmụ nwanyị ndị napụtara na <37 izu nke gestation; ezigbo uru (dịka, mmụba nke nhụjuanya na ọnwụ) adịghị eguzobe.
ACOG na-atụ aro ịnye mgbakwunye progesterone maka mgbochi ịmalite ịmụ nwa na-ebuteghachi na ụmụ nwanyị nwere ime nwa na-agụ nwa ma ọ bụ ịmụ nwa tupu oge ọmụmụ <37 izu nke gestation n'ihi ọrụ mgbochi ma ọ bụ nkata na-emezughị.